एन्टोजको महाधिवेशनले शर्माको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको टुङ्गो लगायो
बर्दिया । पर्यटनकोबीटमा क्रियाशिल पत्रकारहरुको साझा संगठन नेपाल पर्यटन पत्रकार संघको शुक्रबार सम्पन्न प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनले २७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ । महाधिवेशनले पत...
काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सडक सञ्जालमा जोडिएका सबै स्थानीय तहका लागि एकैपटक गाडी किन्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाबम...
काठमाडौं । राज्यको आलंकारिक र कार्यकारी निकाय होस् वा कुनै संघसंस्था, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख भन्नासाथ धेरैले दोस्रो तहको मात्रै ठान्छन् । प्रमुखको अनुपस्थितिमा मात्रै कार्यकारी अधिकार हातमा आउने संवैधानि...
लालबन्दी नगरपालिकामा एमालेको प्यानलै विजयी
सर्लाही । लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा नेकपा एमालेको प्यानलै विजयी भएको छ । एमालेको मोहन भण्डारी विजयी भएका हुन् । त्यसैगरी लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा नेकपा एमालेको प्यानलै विजयी भएको छ...
धनुषाका दुईवटा गाउपालिकामा एमालेले सुर्य झण्डा फरायो
धनुषा । एमालेले जित निकालेको छ । जिल्लाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको हो । मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका प्रमुखमा एमालेका मनोजकुमार यादव ३५४० मतका साथ विजयी भएका हुन् । उपा...
वीरगञ्ज महानगरमा कांग्रेसले गर्यो चमत्कार ! भारी मतअन्तर छोट्याएर राजपालाई टक्कर
पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा रातभी गणना गरिएको मतबाट नेपाली कांग्रेसले चमत्कारी नतिजा ल्याएको छ । भारी मतअन्तरलाई छोट्याउदै शीर्ष स्थानमा रहेको राजपालाई कांग्रेसले टक्कर दिएको छ । पर्साको वीरगञ्ज मह...
धनगढी नगर क्षेत्रमा जडान सबै सीसी क्यामरा सञ्चालनमा
धनगढी । धनगढी नगर क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा जडान गरिएका सबै सीसी टिभि क्यामेरा संचालनमा आएका छन् । १२ वटा क्यामेरा मध्ये अधिकांश प्रयोगबिहिन रहेका बेला मंगलबार मर्मत गरेसंगै सबै क्यामरा संचालनमा आएका ह...
रसुवा । अवैधरुपमा चीन लैजान लागेको डलरसहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेकी छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख शरतकुमार थापा क्षेत्रीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ४७ वर्षीया चिनियाँ महिला लि वान रहेकी छन् । उनको स...
पर्सा। पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा (एमाले) र उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । गएराति सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम परिणामअनुसार एमालेका हरिनारायण चौधरी दुई हज...
राजपाले खोल्यो खाता
धनुषा । दुई नम्बर प्रदेशमा गएको सोमबार भएको स्थानीय तह चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले खाता खोलेको छ । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाको मेयरमा राजपाका रामज्ञान मण्डल विजयी भएका हुन् । यस्तै हंस...
वीरगन्ज महानगरपालिकामा कांग्रेसले खाता खोल्यो
बिरगञ्ज । प्रदेश नम्बर-२ को एक मात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले जितको पहिलो खाता खोलेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर-३० को वडा अध्यक्षमा जित पार्दै कांग्रेसले पहिलो खाता खोल...
कांग्रेसलाई हार चखाउदै बटेश्वर गाउँपालिकामा एमाले विजयी
धनुषा । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका डम्बर बहादुर राउत २ हजार ३ सय ७७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रामअशिष महतोले २ हजार १ सय ९६ मत ल्याए । यस्तै उपाध...
काँग्रेस १०, एमाले छ र लोकतान्त्रिक फोरम चारवडामा विजयी राजविराज । नेपाली काँग्रेसले कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नं १ र २ मा जित दर्ता गरेको छ । नगरको वडा नं १ बैरवामा करिम शेख ४ सय ६५ मत प्राप्त गरी विज...
चित्र कलाकार राईको निधन
काठमाडौँ । चित्र कलाकार शान्तकुमार राईको पेटको अर्बुद रोगबाट नेपाल क्यान्सर अस्पताल, हरिसिद्धि, ललितपुरमा ५६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको बुधबार राति ९ बजेर ३० मा निधन भएको हो । उनी डेढ महिनादेखि...
विष्णुपुर गापामा संघीय फोरम विजयी
लहान । सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल विजयी भएको छ । गएराति सम्पन्न भएको मतपरिणाम अनुसार विष्णुपुर गाउँपालिकाको प्रमुखमा फोरम नेपालका उम्मेदवार जागेश्वर यादव एक हजार ९ सय ४०...
बाढीपीडितको दसैँ पनि छाप्रोमै दुई वर्षअघि आवास गुमाएका झन्डै ६ लाख भूकम्पपीडितले यस वर्षको दसैँ पनि छाप्रोमै मनाउने भएका छन् । निजी आवास निर्माण सुस्त हुँदा उनीहरू टहरोमै दसैँ मनाउन बाध्य छन् । राष्ट...
२५ बर्ष पछाडी धकेलियो सार्वजनिक शिक्षा : आपत्ति जनाउँदै दुई शिक्षाविदले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालय थप धराशायी बनाउने गरी शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनप्रति आपत्ति जनाउादै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्ले राष्ट्रिय उच्चस्तरीय शिक्षा आयेगबाट बाहिरिएका छन् । स...
काठमाडौँ । सुन तस्करीमा चिनियाँ नागरिक पेन वेइमिङ र उनकी श्रीमती याङ संलग्न रहेको खुलेको थियो । सुन बरामद भएको दिनसम्म काठमाडौंमै रहेकी याङ चीन पुगिसकेको प्रहरीले सूचना पाएको छ । ‘श्रीमतीचाहिँ चीन भ...
काठमाडौँ । चीनले नेपालसँगको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी–खासा नाका सधैँका लागि बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । उसले यसबारे नेपालसमक्ष औपचारिक प्रस्तावसमेत राखेको छ । नेपालले प्रयोग गर्दै आएको खासा–ओलाङचुङगो...
सकसमा ठूला दलहरू : कांग्रेसी झन्डाको ठाउँमा फहरायो राजपाको झन्डा
काठमाडौँ । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रभाव क्षेत्र मानिने धनुषाको हंसपुर नगरपालिका ०४६ सालपछि कांग्रेसले आधारभूमि बनायो। पञ्चायतकालमा धनुषा शेरको नामले चिनिएका हेमबहादुर मल्लको यो क्षेत्र प्रजातन्त्र पुनः...